java | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ငါ javarush ဖို့စာရင်းသွင်းခြင်းမဝယ်သင့်ပါတယ်!? ကဝန်ဆောင်မှု javarush.ru ကြောင့်တစ်ဦး java ပရိုဂရမ်မာဖြစ်လာဖြစ်နိုင်ပါသလဲ
သင် javarush! Subscription ကိုဝယ်သင့်ပါသလား။ javarush.ru ၀ န်ဆောင်မှုကြောင့်ကျွန်ုပ် java ပရိုဂရမ်မာဖြစ်လာနိုင်သလား။ ဒီနေ့ခေတ်မှာအရာအားလုံးကိုအခမဲ့သင်ယူနိုင်တယ်။ ကြေးပေးသွင်းဝယ်ယူမှုအနတ္တဖြစ်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင်သင်တကယ် code လုပ်ချင်ရင် ...
ကုမ္ပဏီ Geekbrains အကြောင်းကိုမဆိုတုံ့ပြန်ချက်ရှိပါသလား? ယောက်ျားတွေ, ကျောင်း Geekbrains နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူမည်သူမဆို? ငါစိတ်ဝင်စားထိ မိ. လဲ။
Geekbrains အတွက်ပြန်လည်စစ်ဆေးမှုများ? Geekbrains ကျောင်းနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်း ၀ င်သောယောက်ျားများရှိပါသလား။ စိတ်ဝင်စား, ဖြတ်ပြီးလာကြ၏။ သင်ယူဖို့သိပ်နောက်ကျလွန်းတယ်။ ငါအသက် 30 မှာပရိုဂရမ်မာဖြစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ကြောင်းမပြုမီငါအတော်လေးလုပ်နေခဲ့ ...
အဆိုပါ PC မှာဘယျလိုဟာ android emulator ပိုကောင်း?
pc အတွက်အကောင်းဆုံး android emulator ကဘာလဲ။ အကောင်းဆုံးမှာ Genimotion ဖြစ်သည်။ သို့သော်အခမဲ့ဖြစ်သည် (အခမဲ့ဗားရှင်းတွင်အင်္ဂါရပ်အနည်းငယ်သာရှိသည်) နှင့်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒုတိယနေရာတွင် BlueStacks ကိုထည့်ပါမည် emulator တွင်ကောင်းသောဗီဒီယိုကဒ်လိုအပ်သည်။
Muranov အဘယ်သူနည်း ဓါတ်ပုံတွေကိုပို့ပါနဲ့ဘယ်သူသိသူတို့ကိုပြောပြပါ။
ဘယ်သူက MURANYAS လား။ ဓာတ်ပုံတွေပို့ပြီးသူတို့အကြောင်းဘယ်သူသိလဲပြောပြပါ။ သေးငယ်တဲ့ moray ငါးရှဥ့်။ Muranyas သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Radomsky နှင့်သူ၏ထိပ်တန်းကော်ပိုရေးရှင်းမှဖန်တီးခဲ့သော Kleito ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသည့်မိန်းကလေးများဖြစ်သည်။
56 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 1,094 စက္ကန့်ကျော် Generate ။